Football Khabar » म्यानचेस्टर सिटीद्वारा प्रिमियर लिग लिभरपुललाई जिम्मा !
म्यानचेस्टर सिटीद्वारा प्रिमियर लिग लिभरपुललाई जिम्मा !
इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा गत राति लिग लिडर लिभरपुलले साबिक विजेता म्यानचेस्टर सिटीलाई आफ्नो घरमा ३–१ ले हरायो । एनफिल्डमा लिभरपुलले शानदार प्रदर्शन गर्दै ३ अंक जोड्दा आफ्नो खास प्रतिस्पर्धी सिटीलाई समान १२ खेलपछि स्पष्ट ९ अंकले पछि छाडेको छ ।
सो खेलपछि म्यानचेस्टर युनाइटेडका पूर्वप्रशिक्षक जोसे मोउरिन्होले यसपटक लिग उपाधि लिभरपुलले जित्ने स्पष्ट नक्सा देखिएको बताएका छन् । सिटीले एनफिल्डमा ३ अंक गुमाउनु उसका लागि खराब नतिजा भएको मोउरिन्होले बताएका छन् ।
‘मलाई लाग्छ, यदि लिभरपुलले सिटीलाई हराउँछ भने उनीहरूले यसपटक लिग उपाधि जित्दैछन् । उनीहरू यसपटक साँच्चै उत्कृष्ट लयमा छन्,’ मोउरिन्होले भनेका छन्, ‘३ अंक गुमाउनु सिटीका लागि यो सिजनकै सबैभन्दा खराब नतिजा हो भने लिरपुलका लागि सबैभन्दा राम्रो ।’
मोउरिन्हो यो बताउँछन् कि, सिटी बलियो टिम भएकाले उनीहरूले लगातार जितेर पुनरागमगन गर्न सक्छन् । ‘सिटी निकै बलियो टिम हो । १२ खेलपछि उनीहरू जुन ठाउँमा छन्, त्यो खराब हो । यद्यपि, उनीहरूले बाँकी खेलमा पुनरागमन गर्न सक्छ,’ मोउरिन्होले भने, ‘तर, सिटी अघि बढ्न लिभरपुल केही खराब नतिजाबाट पीडित हुनुपर्छ ।’
प्रकाशित मिति २५ कार्तिक २०७६, सोमबार १२:३६